UAE Matare | Mutemo Makambani Dubai
zvakajairika mutemo weAU
Kudzivirira pamberi pedare reUAE
Dare chiitiko, chinzvimbo chehurumende, chine masimba ekutonga kusawirirana kwepamutemo pakati pemapato uye kuita hutongi hwejekerere muzvinhu zvehurumende, mhosva, uye hutongi zvichitevedza mutemo.
Mumitemo yakafanana neyemitemo yemutemo wehurumende, matare ndiyo nzira huru yekugadzirisa gakava, uye zvinonzwisisika kuti vanhu vese vanogona kuunza zvichemo zvavo kudare. Zvimwechetezvo, kodzero dzevanopomerwa mhosva dzinosanganisira kodzero yekupa chidziviriro pamberi pedare reAU kana Dubai Courts.
adhiresi: Bur Dubai, Um Hurair 2, Al Riyadh st, pedyo neAl Maktoum bhiriji
Makani Nhamba: 3089993465
Tinya apa kuti uone mepu (Google)
Bata Fomu kuDubai Courts Dzvanya apa:
Kubva 8:00 AM kusvika 2:00 PM.
Mahara ebasa mukati memwedzi weRamadan
Kubva 9:00 AM kusvika 2:00 PM.